ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ
သငျသညျခံစားရလျှင်သင်တစ်ဦးအာဖရိက Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, ထပ်စဥ်းစား. သငျသညျသငျနှငျ့အတူအကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခရီးသွားလာနေသောရင်တောင်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိထားဖြစ်နေဆဲအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
အင်ဒရူး Muigai AfricaPoint အတွင်းအွန်လိုင်းသတင်းလွှာ၏အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Africapoint.com ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - ခရီးသွားများအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အာဖရိကရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးခဲ့တယ်သောအာဖရိကခရီးသွားက်ဘ်ဆိုက်. သငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက်မှာယူဂန်ဒါ Safaris အပေါ်ပိုပြီးအချက်အလက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
The New York Times: အဆိုပါနီးပါး Omniscient မီဒီယာသတင်းထောက်
Orlando တွင်- not just for kids
15 Lanzarote Beach – Arrecife